WOWOW IFaucet yeKitchen yeKitchen ene-Pull-Out Sprayer-IiFaucets zaseKitchen eziBalaseleyo ngo-2021 | IiFaucethi zeBathroom ezigqibeleleyo | WOWOW iiFaucets
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Thatha iipompu zekhitshi / WOWOWIChannel yeKinki yokuSinki yeSinki yokuKhuphela ngaphandle
WOWOW IKhitshi yeKhitshi yeKhitshi yokuKhangela ngeKhomputha yokukhupha ngaphandle
Thenga ikhitshi Faucet i-single Handle inomsebenzi wokurhoxisa ngokuzenzekelayo. Umsebenzi wokudonswa kwefeni yokudonsa ikakhulu uphunyezwa yibhola yomxhuzuli (eyaziwa ngokuba yibloko yomxhuzuli kunye nesando somxhuzulo).
2310800C imiyalelo yokufaka
Thatha iitephu zomxube wekhitshi
Ngaba ujonge ikrismesi yeklasikhi yehla isitya somxube wasekhitshini? Sukuqhubeka nokufuna! I-WOWOW ikunika enye yeyona nto ibalaseleyo kunye neekopi zangoku zokuxuba ikhitshi oza kuzifumana kwimarike. Ixabiso layo lemali alinakuvinjwa, njengoko i-WOWOW iyazi ukwenza iimpompo zekhitshi ekumgangatho ophezulu ngexabiso elixabiso eliphantsi. Ngaphandle koko, uyilo lwayo olwahlukileyo lwenza ukuba i-WOWOW idontse ikhitshi yomxube wasekhitshini icofe umntu oza kubamba iliso kuyo nayiphi na ikhitshi. Xa ukhetha uyilo lweklasikhi yeklasi yasendulo, okanye uyilo lwasekhitshini lwale mihla, eli litephu lokuxuba ikhitshi liya kulunga kanye.
Ngalo lonke ixesha abaqulunqi beWOWOW belawula ukuyila iitephu zomxube wasekhitshini ezimangalise abantu abaninzi. I-WOWOW ifuna kuphela ukuyila iitephu zomxube wekhitshi wokubamba ngamehlo owenza umehluko kuyo nayiphi na ikhitshi. Abanye abantu bayayithathela ingqalelo impembelelo yeempompo zomxube wasekhitshini, njengoko zisenza umahluko omkhulu kuyo nayiphi na ikhitshi. Iitephu zomxube wekhitshi zinokongeza ukuthinta okhethekileyo kuyo nayiphi na ikhitshi. Abaqulunqi eWOWOW bayazi kakuhle le nto. Ngaphandle kwento iitephu zomxube zasekhitshini ze-WOWOW zithengiswa kubathengi abavela kwihlabathi liphela.
Iitephu ezisebenzayo zokuhlisa isitya somxube wasekhitshini
Iitephu zokuxuba ekhitshini ze-WOWOW zibonisa ukuba isampulu yamanzi inokususwa lula kwimpompi yomxube wasekhitshini. Oku kuyayonyusa indawo yakho yokugungxula kunye nenye intshi ye-15 ukuya kwi-23 intshi. Umbhobho wamanzi wokuphinda ubuye ungakhutshwa ngokulula, ukwandisa indawo yakho yokuhlamba kakhulu. Zonke iikona zekhitshi lakho zisinki, ebelinzima kakhulu ukufikelela kulo ngepompo yakho yomxube wekhitshi, ngoku inokucocwa ngokulula. Umbhobho wamanzi unokukhutshwa ngokulula kwaye emva kokusetyenziswa kwawo, uya kubuyela ngokuzenzekelayo kwisimo sakhe sokuqala.
Enye into ebaluleke kakhulu kwiipompo zokuxuba ekhitshini ze-WOWOW yipompo ye swivel enokuhambisa iidigri ezingama-360. Oko kwenza ezi zitephu zokuxuba ikhitshi zasekhitshini zilungele ngokukodwa ukuzinki kweekhitshi ezimbini. Ngale ndlela kulula ukutshintsha ukusuka kwikhitshi enye ukuya kwesinye. Kuziva kugudile ukusebenzisa ezi mpompo zomxube wekhitshi njengoko i-WOWOW isebenzisa izixhobo ezikumgangatho ophezulu kwitephu yayo yokuxuba yasekhitshini. Uyawubona umahluko ngoko nangoko xa usebenzisa ikhonkco lokuxuba ikhitshi le-WOWOW.
Iindlela ezi-3 zehlisa iimpompo zomxube wasekhitshini
Iitephu zokuxuba ekhitshini ze-WOWOW zinokuqhutywa ngumntu omnye onomgangatho ophezulu. Amanzi ashushu kunye abandayo anokuxutywa ngesandla esinye de lufikelele kubushushu obufanelekileyo. Kwaye oku kusebenza kumthamo wamanzi ngokunjalo. Ngale ndlela uya kuhlala ugcina isandla simahla sokwenza eminye imisebenzi yasekhitshini. I-cartridge ye-ceramic-ye-drip-engaqinisekisiyo iqinisekisa ukusebenza kakuhle. Ngenxa yokutywina kwayo, i-lever ijikeleza kakuhle kwaye iqinisekisa ukusetyenziswa kwexesha elide ngaphandle kokudonsa amanzi okanye ukuvuza. Kwaye ngaphezulu kwayo yonke loo nto, iqinisekisa nolawulo oluchanekileyo nolungenakunyuswa lweqondo lobushushu lamanzi ngaphandle kwako nakuphi na ukubuyela umva.
I-WOWOW's donsa phantsi iitephu zokuxuba zasekhitshini zibonelela ngompetha womsebenzi wasekhitshini abathathu. Ngaphandle kwendlela eqhelekileyo yokuhamba kwamanzi, unokukhetha imowudi yokutshiza okanye imo yecala lamanzi. Le ndlela ye-aqua-blade ikubonelela ngejet yamanzi eyomeleleyo, enokuthi ikhuphe lula yonke inkunkuma yokutya kwiipleyiti okanye ekhitshini lizenzele ngokwalo. Lo msebenzi wahlukile kwimarike kwaye ngokuqinisekileyo uluncedo ekutsaleni iitephu zomxube wekhitshi zeWOWOW ngaphezulu kwezinye iimpompo zokuhombisa ekhitshini. Ungayitshintsha ngokulula imisebenzi yefowna ngokuchukumisa iqhosha, elibekwe ngokulula entlokweni yesitshizi kwitagi yokuxuba yasekhitshini.
Umgangatho ophakamileyo wehlisa iimpompo zomxube wasekhitshini
Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, i-WOWOW iyazi kakuhle ukubaluleka komgangatho wokudonsa phantsi iitephu zomxube wekhitshi. Kungenxa yoko le nto iWOWOW isebenzisa izixhobo ezikumgangatho ophezulu ezigqithe kwimigangatho yemizi-mveliso ngokubanzi. Cinga malunga neenkqubo zokwenza i-premium top electroplating process, izinto zomhlaba ezidumileyo njenge-Neoperl aerator, kunye nezixhobo zensimbi eziqinileyo. Ukuqinisekisa nje ukuba usebenzisa eyona mveliso isebenzayo ekusetyenzisweni ixesha elide. Ke ngoko i-WOWOW inokunika iwaranti yemveliso yeminyaka emi-3 kwimpompo yakhe yokudibanisa ekhitshini. Kwaye ngaphezulu kwako konke, kwi-WOWOW siqinisekile ukuba uya kuqhubeka nokubuyela kuthi, njengoko uninzi lwabathengi bethu bahlala bethembekile kubathengi ngobomi ngenxa yexabiso eliphantsi lemali esinikezela ngayo.
Intloko yokuhlamba esuswayo ephezulu yokuhlisa iitephu zomxube wekhitshi kulula ukususa okanye ukutshintsha. Ngale ndlela unokucoca kwaye ugcine intloko yokutshiza yelixube lokuxuba ngokulula, kwaye ususe yonke intsalela yamanzi anzima ayiqokelele ngexesha lokuqokelela. I-WOWOW's ukudonsa phantsi iitephu zokuxuba ekhitshini kufanelekile kakhulu kwiinkqubo zoxinzelelo oluphezulu. Ipayipi yamanzi e-silica eguqukayo yelitha ngoko ke inika ukusebenza okugudileyo kunye nokuqina kobomi obude.
Ukufakela iitephu zokuxuba ekhitshini
Iitephu zokuxuba ekhitshini ze-WOWOW zinokubekwa kwindawo enye okanye ezi-1 zekhitshi. Idesika ebekwe phantsi idonsa yokuxuba ikhitshi yasekhitshini iziswa ngekhiti yokufaka epheleleyo. Ngomdwebi wensimbi obekwe phezu kwekhava yonke imingxunya igutyungelwe, ke uya kuqinisekiswa ngeteki efakwe emgangathweni phantsi komatshini wokuxuba wasekhitshini. Ukuze ukwazi ukufaka ezi mpompo zomxube wekhitshi uphosa ngokwakho, zonke izixhobo zekhompyuter zifakiwe kwiphakheji. Ungagqiba ukufakela iitephu zokuxuba ekhitshini njengemimoya evuthuzayo. Ngevidiyo yendibano ungagqiba ngokulula ukufakwa kwimizuzu engaphantsi kwe-3. Oku kuya kukugcinela iplumber ebizayo!
Ngaphandle kwesiqinisekiso sokugunyazisa seminyaka emi-3 esikunikezelwa yi-WOWOW xa uthenga ezi mpompo zomxube wekhitshi, iWOWOW ikunika isiqinisekiso seentsuku ezingama-90 zokubuyisa imali-kamva. Ukuba awungekhe uchukumiseke lixabiso lemali oyifumanayo ngokuthenga ezi mpompo zomxube wekhitshi, unokubuyisela udropu womxube wasekhitshini ngaphandle kwengxaki. Uya kufumana imbuyekezo epheleleyo ngaphandle kwemibuzo ebuzwe.
Izibonelelo zokuncipha kweempompo zomxube wekhitshi ngezantsi:
Nika wow-factor kuyo nayiphi na ikhitshi
Uyilo oludala kunye nolwangoku
Iindlela ezi-3 zamanzi, kubandakanya uxinzelelo oluphezulu lwe-aqua-blade
Kubandakanya ikiti yokufaka onokuzenzela yona
Isiqinisekiso sokubuyela umva semali ngeentsuku ezingama-90
I-SKU: 2310800C iindidi: IFaucets yasekhitshini, Thatha iipompu zekhitshi tags: 1 Umngxunya, chrome, Yehlisa
I-54 × 28 × 7 cm